Dejero သည် NAB တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ကွင်းဆင်းပံ့ပိုးမှုများ၊ ပါဝင်မှုဖြန့်ဝေမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုအဖြေများကိုပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dejero NAB မှာနောက်ဆုံးပေါ်လယ်ကိုအလှူငွေ, content တွေကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်မှ
Dejero NAB မှာနောက်ဆုံးပေါ်လယ်ကိုအလှူငွေ, content တွေကိုဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်မှ
ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာသပ္ပါယ် encoding ကနှင့်အတူနယူး EnGo မိုဘိုင်း transmitter ကို, SMPTE featured ခံရဖို့ CellSat, Gateway နှင့်ထိန်းချုပ်ရေးမှ 2110 ထောက်ခံမှုနှင့်တိုးမြှင့်မှုများ
[Waterloo, အွန်, ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2019] - Dejeroမိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများအတွက်လာမည့် NAB 2019 ပြပွဲ (ဧပြီ 8-11, 2019, Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ) မှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းချက်ပြနေစဉ်, Emmy®ဆုပေးသောမိုဃ်းတိမ်-managed ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ်တဲ့ဗီဒီယိုကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအနိုင်ရ တဲ C2025 မှာ။ သူတို့ရဲ့ဟန်ပြ, ယနေ့အထိထောက်ခံနောက်ဆုံးပေါ်, အာဏာအရှိဆုံး EnGo ပါဝငျမညျ SMPTE 2110 နှင့်အလှူငွေ, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဆက်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်မှတိုးမြှင့်မှုများ။
EnGo 1.3 မိုဘိုင်း transmitter ကို
နောက်ဆုံးပေါ် EnGo မိုဘိုင်း transmitter ကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာသပ္ပါယ် encoding ကနှင့် HEVC ချုံ့ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ပို processing power ပါရှိပါတယ်။ သည်အခြားလယ်ကွက်က transmitter မတူဘဲ, Dejero EnGo encoding ကယခုအလိုအလြောကျကဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အကြောင်းအရာရှုပ်ထွေးဖို့ adapts နှင့် 20 Mb / s ကိုတိုက်ရိုက် transmission ကိုအဘို့အဘစ်နှုန်းနှင့်အားကစားများအတွက် 1080p 50 / 60-စံပြအထိထောက်ခံပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကး၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ပင်ပိုကောင်းရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုပေး, HEVC ချုံ့နှင့်အတူ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Auto-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သပ္ပါယ်ဘစ်နှုန်း encoding ကနည်းပညာကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ဤသည်ပေါင်းစုံဆုရ Blend ဆယ်လူလာနှင့် ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုယခုတိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ, ခရီးဆောင် flyaway နှင့်မော်တော်ယာဉ်-mount options များအပါအဝင်အများအပြားအင်တင်နာ options များနှင့်ဖောက်သည်များ၏မတူညီလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်နောက်ထပ်ဆက်သွယ်မှုအစီအစဉ်များကိုပေးပိုဆောင်း features တွေပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာဥရောပမှာလည်းယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
ဒါဟာလယ်ပြင်၌ရှိသောသူတို့အားမရရှိနိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုများကိုမှကြွလာသောအခါ CellSat ထုတ်လွှင့်အတွက်အသစ်တခု-တွေ့ရှိခဲ့ယုံကြည်မှုသွတ်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်သိရသည်။ ထိုသို့သောကွန်ယက်ကိုပိတ်ဆို့မှုကိုသို့မဟုတ်အသိဥာဏ်ဆယ်လူလာနှင့် Ku-band IP ကိုရောစပ်ခြင်းဖြင့်စော်ကားသောဆယ်လူလာစွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်စိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု, အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရိုက်ချက်များအတွက်ဤဂီယာလမ်းကြောင်းရဲ့အကောင်းဆုံး attribute တွေ fusing ။
first-မိုင် / နောက်ဆုံး-မိုင်ဆက်သွယ်မှု
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုမှ Access ကိုအလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ ပို. ပင်အရေးပါဖြစ်လာသည်။ NAB 2019 ယင်းမှဆက်ပြောသည် features အသစ်ရှုမြင် Dejero အိုင်ပီကွန်နက်ရှင်နဲ့ပိုမြန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းမဆိုအမျိုးအစားပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုအပါအဝင် Gateway ဖြေရှင်းချက်။
Gateway ထိုကဲ့သို့သောဆယ်လူလာအဖြစ်မျိုးစုံဆက်သွယ်မှုအတူတူရောစပ်ခြင်းဖြင့်မြင့်မားသော bandwidth ကိုဆက်သွယ်မှုပေး ဂြိုဟ်တု နှင့်အခြားကြိုးမဲ့လုံခြုံတဲ့ connection ကိုကျော်ပိုမိုမြင့်မား throughput နှင့်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရနည်းပညာများဖန်တီး။
Gateway လျင်မြန်စွာအဝေးမှကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေအဖြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်သတင်းကဏ္ဍနှင့်ပေးခဲ့သည်စနစ်များ, မိုဃ်းတိမ်ကိုန်ဆောင်မှုများနှင့်ပုဂ္ဂလိကကွန်ရက်များ upload နှင့် download လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပို bandwidth ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်တည်နေရာအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ, လယ်ပြင်သမားတွေအဝေးမှပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောသားတာဝန်တွေကြားကပြန်နှင့်ထွက်ခရီးသည်လယ်ပြင်၌ရှိသောပိုပြီးအချိန်နှင့်ဒီထက်အချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။
Dejero ဒါ့အပြင် Gateway ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်ပထမဦးဆုံး-မိုင် / နောက်ဆုံး-မိုင်ဆက်သွယ်မှုစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်သောအခြားအသံလွှင့်နှင့်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုအမှုပေါင်းအဖြစ် backup လုပ်ထားဆက်သွယ်မှုများအတွက်အသုံးပြုရနိုင်ပုံကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Dejero အိုင်ပီ-based အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်အရည်အသွေးမြင့်, အနိမ့်-အောင်းနေချိန်၏ခွဲဝေမှုရိုးရှင်းစွာ, Real-time ကိုဗီဒီယို feeds ။ ဒါဟာအကြီးစား cloud-based အကြောင်းအရာခွဲဝေမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးထားပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများ, နှင့်စတူဒီယိုလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်မဆို, မည်သည့်နေရာသို့မဆိုတည်နေရာကနေ content တွေကိုဖြန့်ဝေ။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူးရိုးရှင်းအင်တာနက်အခြေခံအဆောက်အအုံ leverages နှင့် bandwidth ကိုလိုအပ်ချက်များကို minimize လုပ်ဖို့သပ္ပါယ်ဘစ်နှုန်း encoding ကနည်းပညာပါရှိပါတယ်။
မိုဃ်းတိမ်ကို managementDejero ထိန်းချုပ်ရေးထုတ်လွှင့်ဗဟိုစားသုံးမိပါစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းပေးသနားတဲ့ cloud-based စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, အကြောင်းအရာလမ်းကြောင်းများနှင့်ဖြန့်ဖြူးစီမံခန့်ခွဲ, လယ်ပြင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဒေတာစင်တာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အမြင် analytics နှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များစီမံခန့်ခွဲကူညီအစီရင်ခံစာများ။
နယူးအင်္ဂါရပ်တွေကလစ်ပ်တည်းဖြတ်ရေးနှင့်ပေးခဲ့သည် Workflows စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ metadata ကိုအလိုအလျှောက်, template ကိုတည်ဆောက်ရန်လွယ်ကူသောအနေဖြင့်စားသုံးမိ၏ထိုအချိန်ကဗီဒီယိုဖိုင်များထည့်သွင်းခံရဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ရုမ်းမင်းစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် automated နှင့်စိတ်ကြိုက် metadata- ပါဝင်သည်။ တက်ရောက်လာလည်းအဖွဲ့အစည်းများမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသတင်းပုံပြင်များနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များကိုချိုးဖောက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အလွတ်များနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားကြောင်း, သစ်ကို '' တစ်ဦးပေးသူကိုရှာပါ '' လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြင်လိမ့်မည်။
ဤအသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမြင်ပြပွဲမှာလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြေညာချက်ထွက်ရှာ, အလည်အပတ်ခရီးမှ Dejero တဲ C2025 မှာ။
နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်, Dejero '' တိုက်ရိုက်အကူအညီပေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးတီဗီ Links များအဘို့အရှေ့ဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာ Method ကို '' ၎င်းတို့၏အလုပ်အတွက်အင်ဂျင်နီယာတီထွင်ဖန်တီးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဘို့အရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီကနေဂုဏ်သတင်းEmmy®ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
Dejero အဆိုပါ NAB (လူငယ်ကဏ္ဍအမျိုးသားအစည်းအရုံး) ပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. တနင်္ဂနွေ, ဧပြီ 70, Las Vegas မှာ 7, NV အပေါ် 2019th နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာ & အင်ဂျင်နီယာEmmy®ထူးချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင်ဂုဏ်ပြုပါလိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CellSat CellSat ဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှု မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖြေရှင်းနည်းများ မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Dejero သူဟာ Emmy ဆုဆွတ်ခူး Emmy®ဆုရနည်းပညာ EnGo 1.3 မိုဘိုင်း transmitter ကို EnGo မိုဘိုင်း transmitter ကို first-မိုင် / နောက်ဆုံး-မိုင်ဆက်သွယ်မှု တံခါးပေါက် အိုင်ပီ-based အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB19 SMPTE 2110 တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-02-12
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းပုံစံများရုပ်ရှင်ရုံဝိဇ္ဇာ၏ USC ကျောင်းနှင့်အတူမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး